Muxuu qabtaa Semalt iyo maxaa?
Sidee ayuu Semalt ka caawiyaa SEO?
Waa maxay Falanqaynta Websaydhada
Sidee ayuu Semalt uga caawiyaa falanqaynta bogga?
La Xiriirka Semalt
Semalt waa hay'ad suuq-geyn oo buuxa oo bixinaysa adeegyo fara badan oo muhiim ah si looga caawiyo ganacsiyadu inay u koraan heerar cusub: AutoSEO, FullSEO, Semalt Web Analytics, Development Web, Production Video iyo adeegyo kale.
Semalt waxaa la aasaasay 2013 waxaana uu leeyahay ku dhawaad toban sanadood raad rikoor ah oo lagu caawinayo ganacsiyadu sidii ay u gaari lahaayeen taraafikada cusub iyo heerarka koritaanka iyada oo la adeegsanayo aaladaha goynta SEO, falanqaynta iyo istiraatiijiyadaha suuq gaynta ee gaarka loo leeyahay.
Semalt wuxuu ka caawiyaa ganacsatada inay noqdaan kuwa sii guuleysta iyadoo la hagaajinayo darajooyinkooda SEO, iyadoo la hagaajinayo natiijooyinkooda suuqgeynta iyadoo la adeegsanayo falanqaynta websaydhka iyo iyadoo la siinayo adeegyo badan oo muhiim ah oo ganacsiyada badani u baahan yihiin koritaanka sida horumarinta websaydhka iyo soosaarka fiidiyowga oo ay ku jiraan fiidiyowyada sharraxa.
Semalt wuxuu leeyahay himilada ah ka caawinta mid kasta oo ka mid ah macaamiisheeda sidii ay u gaari lahaayeen heerar cusub oo guul ah iyadoo la siinayo adeegyo miisaaniyad u leh SEO iyo adeegyo suuq geyn.
Semalt wuxuu xusay in ujeeddadiisu tahay inay ka caawiso macaamiisheeda sidii ay ugu fiicnaan lahaayeen Google iyo noloshaba. Waxay ku dadaaleysaa inay macaamiisheeda siiso adeeg macaamil jawaab celin leh iyo adeegyo suuq geyn oo kala jajaban oo ay ku fulin karaan miisaaniyad kasta.
Kordhinta SEO ama mashiinka raadinta ayaa ah habka kaliya ee lagu helo taraafikada ka badan natiijooyinka raadinta dabiiciga ah ee matoorada raadinta.
Mashiin kasta oo raadinta weyn ah (Google iyo Bing) waxay leeyihiin liistada natiijooyinka raadinta aasaasiga ah oo ay ku jiraan bogag internet iyo noocyo kale oo ka kooban waxyaabo ay ka mid yihiin fiidiyowyo iyo qoraallada warbaahinta bulshada.
Kordhinta mashiinka raadinta ayaa ah habka lagu helo websaydhyada ganacsiga iyo waxyaabaha ku jira si loogu muujiyo si muuqata oo muuqata natiijooyinkaas. Waa geedi socod wajiyo badan leh oo ku lug leh xulista ereyga furaha, dhismaha isku xirka, kobcinta bogga, iyo dhowr talaabo oo kale oo socda.
Sawirka hoose, SEO waxaa loola jeedaa inay ka caawiso websaydhka inuu ka dhex muuqdo astaamaha "dabiiciga" ah halkaas oo websaydhyadu ay ka darajo sarreeyaan marka dadaallada SEO-ga la hirgaliyo iyada oo lagu muujinayo aagagga "la bixiyay" kharash kasta oo ka mid ah degelladaas internetka lacag. (PPC) xayeysiinta.
Laga soo bilaabo 2013, Semalt wuxuu ka caawiyay meherado kala duwan sidii ay u horumarin lahaayeen mashiinkooda baarista waxuuna rikoor dheer ku leeyahay sheekooyinka guusha ee ka dhashay dadaalkooda.
Maanta Semalt wuxuu ka caawiyaa ganacsatada kobcinta mashiinka raadinta inta badan iyada oo loo marayo laba adeegyo muhiim ah: Auto SEO iyo SEO oo buuxa, kuwaas oo hoosta lagu sharaxay.
Semalt wuxuu sidoo kale bixiyaa La-tashi SEO ah oo Bilaash ah si looga caawiyo ganacsatada go'aaminta waxa ay baahiyahooda hadda yihiin iyo go'aansiga u dhexeeya labada xirmo ee adeegyada kale ee ay shirkaddu bixiso.
Auto SEO waa heerka gelitaanka Semalt ee adeegga SEO kaas oo asal ahaan bixinaya astaamo badan oo SEO ah oo qiimo aad u hooseeya. Adeegyada waxaa ka mid ah: kor u qaadista bogga, dhismaha iskuxirka, cilmi baarista ereyga, hagaajinta aragtida websaydhka iyo falanqaynta shabakadda.
Semalt waxay tan u soo bandhigaysaa inay tahay ikhtiyaar u fiican ganacsiyada ka dhacaya dhulka ama aan hubin halka laga bilaabayo tayadooda baarista. Auto SEO wuxuu awoodaa tikniyoolajiyadda raadinta koofiyadda cad si uu uga caawiyo websaydhyada inay si dhakhso leh u gaaraan qiimeyn sare.
Waxay ku kacaysaa kaliya $ 0.99 in lagu bilaabo 14-maalmood oo tijaabo ah Auto SEO, oo halkaas laga soo qaado qiimayaal macquul ah qiyaastii $ 99 bil kasta oo qiima dhimis ah 3 bilood, 6 bilood, iyo iibsasho-sanadle ah.
Sababtoo ah Auto SEO waxay bixisaa qiime macquul ah oo hooseeya, adeeggan wuxuu caan ku noqday shirkadaha bilowga ah iyo kuwa raadinaya inay helaan taraafikada bilowga ah iyada oo loo marayo dadaallada kobcinta matooriga aasaasiga ah iyada oo aan la gelin miisaaniyaddii sare ee billaha ee ay wakaalado badan oo kale u baahdaan.
SEO oo dhammaystiran ayaa ah xulashada heerka labaad ee Semalt oo bixiya astaamo kala duwan oo heer sare ah oo adeeg ah marka loo eego Auto SEO.
SEO oo dhammaystiran waxay bixisaa xirmo dhammaystiran oo ay ka mid yihiin: qorista nuxurka, kobcinta gudaha, hagaajinta barta internetka, kasbashada isku xirnaanta, taageerada joogtada ah iyo la tashiga iyo adeeg kasta oo dheeraad ah oo laga yaabo inuu u baahdo macmiilku.
Macaamiisha buuxa ee 'SEO' ee Semalt waxaa ku jira shirkado waaweyn oo elektaroonig ah oo ay weheliso maamulayaasha websaydhka shaqsiyaadka iyo aasaasayaasha bilowga. Saddex ikhtiyaar ayaa loo heli karaa SEO dhan: maxalli, caalami ama SEO caalami ah iyadoo kuxiran gobolka uu macaamilku doonayo inuu bartilmaameedsado.
SEO oo buuxa waa xulasho wanaagsan ganacsiyada bilaabaya inay galaan marxalad koritaanka una baahan in la hubiyo in degelkooda la jaanqaado heerarkii ugu dambeeyay ee SEO, in khaladaad kasta oo SEO ah la yareeyo, iyo kuwa doonaya natiijooyin wax ku ool ah oo gaagaaban iyo muddada fog SEO.
Heerka sare ee adeegu wuxuu ka caawiyaa ganacsiyadu inay hubiyaan in dhammaan howlaha SEO ee loo baahan yahay inay kor ugu qaadaan darajooyinka oo ay sii jiraan waxaa laga shaqeynayaa bil kasta: laga bilaabo dhismaha isku xidhka abuurka, hagaajinta khaladaadka bogga, kobcinta bogga, iyo cilmi baarista ereyga.
Qiimaynta qiimaha buuxa ee SEO waa kala duwan tahay iyadoo kuxiran baahida macmiilka iyo mashruuca, iyo faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qiimeynta waxaa lagu xaqiijin karaa adigoo la xiriiraya mid ka mid ah wakiilada Semalt.
Falanqaynta websaydhku waa noocyada xogta ee kala duwan ee la qabtay iyadoo laxiriira degel: bal inay tahay xog dibadeed oo laxiriirta qiimeynta booska mashiinka raadinta iyo qiimeynta tartamayaasha ama xogta gudaha ee laxiriirta taraafikada, sicirka beddelka, sicirka boodhka, iwm
Xogtan waxaa loo adeegsan karaa in lagu hagaajiyo degel siyaabo badan. Iyada oo xogtu ay xudunta u tahay ololayaasha suuqgeynta wax ku oolka ah, waxaa muhiim ah in lagu tirtiro falanqaynta websaydhada guusha muddada dheer leh websaydh.
Tusaalooyinka falanqaynta websaydhka waxaa ka mid noqon kara darajooyinka darajooyinka furayaasha gaarka ah, liisaska ereyga ereyga ee websaydhka, warbixinnada kobcinta bogga, liisaska bogagga internetka tartamaya iyo darajooyinkooda, tirakoobyo kale oo badan.
Semalt waxay bixisaa dusha sare ee qalabka falanqaynta shabakadda kaas oo u oggolaanaya isticmaaleyaasheeda inay qabtaan howlo badan oo ganacsi ah. Darajooyinka ereyga furaha ayaa si dhakhso leh looga hubin karaa qalabka oo lagu muujiyaa aragtida websaydhka ee internetka.
Bogagga internetka tartamaya sidoo kale waa la sahamin karaa. Khaladaadka kobcinta bogga Warbixinta darajooyinka shabakadda oo faahfaahsan sidoo kale waa loo jiidi karaa waqti waliba sidoo kale.
Qalabka falanqaynta ee websaydhka Semalt wuxuu siiyaa maamulayaasha webka awood ay ku sahamiyaan fursadaha suuqgeyn cusub oo ay u go'aamiyaan sida saxda ah ee ka shaqeynaya dadaalkooda SEO-ga iyo waxa lagu sii wanaajin karo.
Qalabka falanqaynta ee Semalt aad ayuu caan u yahay wuxuuna bixiyaa qaybo badan oo ay ka mid yihiin:
Fikradaha keyword ee bixiya fikradaha furayaasha cusub ee ganacsiga
Qiimaynta ereyga furaha si ay ula socdaan jagooyinka ereyga muhiimka ah ee makiinadaha raadinta maalin kasta
Dabagalka nooca 'Brand' kaas oo soo bandhigaya sumcadda websaydhka
Muuqaal mawduuc keyword keyword kaas oo soo bandhigaya darajooyin waqti dheeri ah
Baadhe tartan ayaa u saamaxa dadka isticmaala inay baadhaan darajooyinkooda iyo ereyada furaha ah
Iyo falanqeeye degel oo falanqeeya degel si loogu hoggaansamo dhaqamada ugu wanaagsan ee SEO.
Kooxda Semalt waxaa la heli karaa 365 maalmood sanadkii iyo 24/7 si ay uga caawiso macaamiisheeda sidii ay ula qabsan lahaayeen adeegyadooda Auto ama Full SEO ama adeegyada kale ee ay shirkaddu bixiso.
Semalt waxay xaruntiisu tahay Kyiv, Ukraine laakiin kooxdeeda caalamiga ah waxay bixisaa taageero iyo isgaarsiinta macmiilka luqado badan oo ay ka mid yihiin Ingiriis, Faransiis, Talyaani, Turki iyo inbadan.
Si ka duwan hay'adaha kale ee had iyo jeer ka maqan koox dhabta ah, kooxda Semalt waa mid la heli karo oo lala kulmi karo wakhti kasta si wax badan looga ogaado adeegyadooda SEO, falanqaynta websaydhka, horumarinta webka, adeegyada abuurista fiidiyowga iyo waxyaabo kale oo badan.
Xaqiiqda Xiisaha Leh: Semalt wuxuu leeyahay libaax xayawaanka la jecel yahay oo la yiraahdo Turbo kaasoo u shaqeeya maskoorka shirkadda kuna nool xafiiska. Haddii aad waligaa booqato Semalt xafiiskooda ku yaal Kyiv, ha ilaawin inaad ag istaagto oo ku dhaho salaanta Turbo!
Semalt wuxuu ka caawiyay shirkado badan sidii ay u gaari lahaayeen heerar cusub oo guul ganacsi ah adoo helaya taraafikada badan, hagaajinta suuq gaynta waxyaabaha ay ka kooban yihiin, taakuleynta falanqeeyayaasha ee koritaanka iyo inbadan.
Natiijo ahaan, shirkaddu waxay waddo dheer u leedahay boqolaal macaamiil oo qanacsan, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay yihiin macaamiil daacad ah oo soo noqnoqda.
Mid kasta oo ka mid ah marag-kacyadan waxaa laga daawan karaa qeybta Shahaadada Macmiilka ee websaydhka Semalt waxayna ku jiraan wax ka badan 30 + marqaatiyo muuqaal ah, in kabadan 140+ marag-kac qoraal ah iyo 24 daraasado oo faahfaahsan, oo ay weheliso dib u eegisyo kale oo badan oo ku saabsan Google iyo Facebook.
Semalt waxay daabacday tiro badan oo daraasado kiis ah oo faahfaahsan boggeeda websaydhada kuwaas oo muujiyey koror ku yimid taraafikada taas oo ay ugu wacan tahay ka faa iideysiga adeegyadeeda Auto SEO ama Adeegyada SEO buuxa. Mid kasta oo ka mid ah daraasadaha kiiskiisa wuxuu leeyahay faahfaahin dheeraad ah oo laga aqrin karo adigoo gujinaya mid ka mid ah liisaska.
Qof kasta oo xiiseynaya Semalt's SEO ama adeegyada kale ee suuqgeynta ayaa booqan kara websaydhkooda si ay u eegaan tiro daraasado badan oo kiis ah oo muujinaya waxtarka adeegyada suuqgeynta kala duwan ee ay tahay in shirkaddu bixiso.
La xiriirida Semalt si looga wada hadlo SEO iyo adeegyo kale way fududahay. Websaydhadu way fududahay in la dhex maro si loo helo xulashooyinka la-tashiga SEO-ga Bilaashka ah ama lagu bilaabo warbixin waxqabadka shabakadda oo bilaash ah.
Semalt waxay bixisaa taageero luuqado badan leh koox caalami ah oo si dhaqso leh uga jawaabeysa weydiimaha. Ku bilaabista Semalt waxay noqon kartaa arrin fudud oo ah helitaanka warbixin waxqabadka shabakadda oo bilaash ah ama la xiriirista mid ka mid ah wakiilkooda si ay uga faa'iideystaan wada tashiga SEO-ga sumcadda ah.